Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra tamin’ny Desambra 2009
Tantara tamin'ny Desambra, 2009
Amerika Latina27 Desambra 2009
Manan-karena tokoa i Amerika Latina raha ara-tantara: ny angano sasany dia tonga aty amintsika avy any Incas, Mayas na Aztecs, ary ny sasany dia azo tamin'ny fanjanahan-tany tany Eoropa. Amin'ny tapany voalohany amin'ity lahatsoratra avy any Amerikana Latina ity, hitety ireo lovan-tsofina sy angano malaza indrindra toa an-dry Llorona, ny...
Rosia: Tantara telo momba fahantrana lalimpàka
Rosia26 Desambra 2009
Ny mpanao gazety an-tsary Rosiana Oleg Klimov dia mizara tantara telo momba ny fahantrana lalimpàka sendra reny raha iny niandry fiaran-dalamby tao amin'ny fiantsonan'ny firan-dalamby tao Syzran, tanàna Rosiana iray ao amin'ny faritr'i Samara .
Ejipta26 Desambra 2009
Repoblika Dominikana: Natao veloma farany i Luis “Rahorohoro” Dias
Amerika Latina21 Desambra 2009
Nanao veloma an'ilay mpitendry sy mpamoron-kira Luis “Rahorohoro” Días [es] ny Repoblika Dominikana, maty vokatry ny areti-po sy olana teo amin'ny voa tany Santo Domingo ny 08 desambra lasa teo izy, araka ny Agencia Efe [es]. Ho an'ny taranaka taty aoriana dia azo antoka fa tsy mahazatra azy ireo loatra...
Sahara Andrefana21 Desambra 2009
Alzeria21 Desambra 2009
Sarimihetsika 3D Kolombiana mivoaka amin'ny aterineto
Taorian'ny herintaona niasana mafy, dia nahavita sarimihetsika fohy ireo orinasa Kolombianina roa, mitantara ny fitiavana voarara eo amin'ny otrikaretin'ny gripa sy ny sela fotsy ary maniry ny hizara azy maimaim-poana amin'ny izao tontolo izao amin'ny fampisehoana azy voalohany amin'ny aterineto.
Polona: Mangata-bola ho an'izay te-hamaky ireo Blaogy
Polonina20 Desambra 2009
Androany, mety ho taitra ireo mpamaky ireo blaogy poloney malaza raha nahita pejy fanolorana vaovao tamin'ny iray amin'ireo vohikala ankafizin-dry zareo indrindra: nilaza izy io fa, manomboka ny 14 Desambra 2009, tsy ho maimaim-poana intsony ny fidirana amin'io blaogy io. Manoratra momba izany i Jakub Gornicki.
Serbia20 Desambra 2009
Mpitoraka blaogy Maraokana, tompona Cyber-Café, voaheloka
Fahalalahàna miteny18 Desambra 2009
Ny Alatsinainy 14 Desambra, i Bashir Hazzam Maraokana mpitoraka blaogy (antsoina koa hoe Hazem, Hazzem) sy i Abdullah Boukhou tompona Cyber-Café dia samy voaheloka higadra efa-bolana sy herintaona tsirairay avy, tao amina Tribonaly iray tao Goulmim. Hazzam dia voaheloka ho “nanely vaovao tsy marina manohintohina ny fijery ny Fanjakana eo...